Debian Edu 10, iyo vhezheni ye "Buster" yekudzidzisa | Linux Vakapindwa muropa
Debian Edu 10, iyo vhezheni ye "Buster" yekudzidzisa
Pakupedzisira Chikunguru 6 raive zuva rakakosha muLinux nyika. Rakave zuva iro iro Project Debian rakaburitsa Debian 10 "Buster", iyo yazvino vhezheni yeanoshanda system pane zvakawanda zvakagoverwa zvakavakirwa, kusanganisira inozivikanwa inozivikanwa Ubuntu. Pakati pezvose zvakaziviswa musi iwoyo, izvo zvaive zvisiri zvishoma, zvakare yakaziviswa Debian Dzidzo 10, rudzi rwekunaka kweDebian iyo yakanangana nekushandiswa kwechikoro.
Muchokwadi, Debian Edu anozivikanwa zvakare se skolelinux. Kugoverwa uku kunopa yakagadzirira-kushandisa uye yakagadzirirwa zvakakwana netiweki nharaunda yechikoro chero chipi zvacho. Edubuntu pamwe inonzwika zvakanyanya kujairika kwauri, sezvo iri imwe yemavhenekeri epamutemo eUbuntu, inozivikanwa kwazvo kuDebian-yakaparadzirwa. Asi pane chikonzero chakaringana kufunga kuti Debian Edu ari nani pane Edubuntu: Chikumbiro cheCanonical chakamiswa makore matatu apfuura.
Debian Edu 10, zvese zvinodiwa nechikoro zvinoenderana neLinux
"Skolelinux" inosanganisirawo zvishandiso zvekumisikidza zone-yakatarwa mitauro yakawanda rutsigiro, yakavandudzwa desktop yemuno yemitauro yese yakatsigirwa, iyo GOsa² plug-in ye password manejimendi, uye zvirinani TLS / SSL rutsigiro pane yemukati network. Iyo vhezheni nyowani inouya nezvose zviri zviviri zviri pamutemo Debian kuisirwa mifananidzo uye zone-yakatarwa modular tsigiro.
Pakati pezvakakurumbira zvinyorwa zvinouya naDebian Edu 10 "Buster", kunze kwekunge yakavakirwa paiyo ichangoburwa vhezheni yaDebian, isu tine:
Chishandiso chitsva chekumutsirazve LDAP dhatabhesi.
Kuwedzera meta-mapakeji kuboka mapakeji edzidzo nedanho rechikoro.
Tsigiro yekumisikidza SSH neNFS masevhisi kuburikidza neKerberos.
Tsigiro yeiyo X2Go server pane masisitimu ane LTSP-Server profiles.
Ivo vanofarira vanogona kurodha yazvino vhezheni yaDebian Edu kubva kune yepamutemo Debian download webhusaiti nekudzvanya pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Debian Edu 10, iyo vhezheni ye "Buster" yekudzidzisa